Ukubuza komthengi: izici zokuqhathanisa zama-glucometer > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
E-assortment yemishini yezokwelapha yanoma yiliphi ikhemisi, elinye lamacandelo amele kakhulu amamitha kashukela egazi. Kusukela abagulayo isifo sikashukelaeza ekhemisi lawa madivayisi uvame ukucela izeluleko kosokhemisi, kufanele azi kahle izici zokuqhathanisa zemikhiqizo yalayini womkhiqizo.
Imakethe ama-glucometer eRussia imelelwa ngenani elikhulu lemikhiqizo ekhethekile (i-Accu-Check, i-One touch, i-Ascensia, iMedisence, i-Bionime, iClever Check, i-Satellite, njll.), ngakunye, okuninginingi okuhlukile, kufaka phakathi okuningana (kusuka ku-2 kuye ku-5 ) amamodeli ahlukile. Ngakho-ke - amagama ahlukahlukene wama-glucometer ezizukulwane ezihlukile kumashalofu emithi kanye nobubanzi bokukhetha idivaysi eyodwa noma enye. Cabanga ngemibandela eyinhloko lapho lolu khetho kufanele lwenziwe khona.
Isilinganiselo sokuqala sivumela usokhemisi ukuthi anciphise amapharamitha wokusesha ngenqubo yokukhetha i-apparatus. Njengoba igama lama-glucometer lisho, wonke aklanyelwe ukunquma izinga ushukela wegazi.
Iningi labo ngasikhathi sinye lilinganisa ushukela. Ngasikhathi sinye, amadivaysi asanda kuvela eRussia enza ukuthi kusungulwe amanye amapharamitha wezinto eziphilayo zomzimba.
Ngakho-ke, imitha ye-Medisense Optium X Contin, kanye noshukela, inquma izinga lezidumbu ze-ketone egazini. Isikhombisi sokugcina sibalulekile ekuhlonzeni ubukhona / ukungabikho kwesiguli isifo sikashukela sikashukela - ubunzima obuningi besifo sikashukela esidinga izindlela zokwelapha ezisheshayo. Qaphela ukuthi ukukalwa kwama-ketones kufanelekile kakhulu kwiziguli ezine Uhlobo 1 sikashukela ngesikhathi sokuxineka, iziguli ezinamazinga aphezulu kashukela egazini (> 13 mmol / l), iziguli ezikhulelwe.
Imitha esebenza kakhulu eRussia yi-Accutrend Plus, yona kanye noshukela, ekala ukuhlangana kwe-cholesterol, triglycerides kanye nama-lactates. Le modeli ingaba nentshisekelo ezigulini lapho isifo sikashukela sithinteka kalula ngenxa yezifo zenhliziyo (i-dyslipidemia, isifo senhliziyo, njll), kanye ne-metabolic syndrome, ukubheka njalo amaphrofayli egazi le-lipid kanye ne-lactate kufaka isandla ekuvinjelweni kwesikhathi kwezinkinga ezibulalayo zama-pathologies angenhla.
Uma umthengi ehlela ukukala ushukela kuphela, amanye amapharamitha eza kuqala lapho kukhethwa idivaysi. Mayelana nokunemba kokulinganisa ushukela, akukho mehluko obonakalayo phakathi kwamamodeli wama-glucometer (ikakhulukazi awaseNtshonalanga) agcina isikhundla sawo semakethe. Ngaphezu kwalokho, lesi sitatimende asisebenzi kuphela uma siqhathanisa amadivaysi e-electrochemical ahlukahlukene (abaningi abakhona manje), kodwa futhi lapho siqhathanisa amadivaysi e-electrochemical namadivayisi amadala we-Photochemical amadivaysi (i-Accu-Chek Active kanye ne-Acu-Chek Active Go). Bobabili banebanga lokulinganisa elifanayo (ngokwesilinganiso esingu-0.6-33.0 mmol / L ngeziphambuko ezincane zamamodeli ngamanye), futhi, okubaluleke kakhulu, bahlangabezana nezidingo eziyisisekelo zokunemba, ikakhulukazi, bathola imiphumela yokulinganisa ebangeni - / + 20 % okuhlobene nezindlela zaselebhu zokunquma ushukela.
Lapha, noma kunjalo, i-caatat ebalulekile iyadingeka: ukufinyelela izilinganiso zikashukela zegazi eziqondile ngaphandle kwamaphutha amakhulu kuncike ekutheni inqubo yenziwa kahle kanjani. Futhi lokhu kuncike kakhulu ekusetshenzisweni kalula kwemitha.
Njengoba wazi, ngaphambi kokulinganiswa kokuqala kwe-glucose, kanye nalapho “kwethulwa” iphakethe elisha lemichilo yokuhlola, ukuthola imiphumela efanelekile, kuyadingeka ukuyikhodi, i.e. "Hlanganisa" nokusebenza kwemitha yegama elifanayo. Indlela endala yokufaka ikhodi ukufaka ngesandla i-“password” usebenzisa izinkinobho. Ngendlela efanayo, amamodeli we-One Touch, Bionime Rightest GM500, "Satellite" namanye amamodeli "athuthukisiwe". Indlela yesimanjemanje futhi elula yokufaka ikhodi ukufaka umugqa wekhodi noma i-chip ekhethekile emshinini. Isebenza ku-Accu-Check, Clever Check, Medisence Optium X Contin, Bionime Rightest GM300, Ascensia Entrust, SensoCard Plus, Satellite Plus nabanye.
Ukuwukuphela kocingo olunikezela ngokuzenzakalela ukufakwa kumakhodi wokuhlola, ngaphandle kwama "qhinga "angenhla - i-Ascensia Contour TS.
Enye yamapharamitha abalulekile enquma ukunethezeka kwesilinganiso se-glucose, yiqiniso, inani legazi elidingekayo ukuthola ukunemba komphumela. Kulula ukuqagela ukuthi uma leli nani leli nani lincane, ukungalingani okuncane inqubo yokulinganisa kuletha isiguli. Le nkomba ibaluleke kakhulu emaqenjini abasebenzisi njengezingane nabantu asebekhulile.
Isisetshenziswa “esinamandla” namuhla iFreeStyle Papillon Mini, edinga kuphela i-0.3 3l yegazi elivela kumsebenzisi. Amanye amamodeli okusindisa ama-glucometer afaka i-Accu-Check Performa, i-Accu-Check Performa Nano, iMedisence Optium X Contin, i-Contour TS, lapha unganikela ngo-0.6 μl ku “altare” lemichilo yokuhlola. Qaphela ukuthi ngesampula yegazi efinyelela ku-1.0 μl, ubuncane bokujeziswa komunwe kanye nokwelashwa okusheshayo kokuluma kunikezwa.
Amamitha asekhaya "anegazi" kakhulu "yi-satellite" ne "Satellite Plus" (isilinganiso esingu-15 μl ngesilinganiso). Kwamadivaysi angenisiwe, kuphela kuphela i-Accutrend Plus multidisciplinary analzer engenhla engaqhathaniswa nabo kule ngxenye, ithatha ama-10 μl kwiseshini yokulinganisa ngayinye.
Sifaka futhi ukuthi amanani wegazi adingekayo ukukala amanye amapharamitha we-biochemical ahlukile kancane noma awafani nakancane nalawo esimweni sokuzimisela kwe-glucose. Ngakho-ke, lapho usetha ukuqoqwa kwemizimba ye-ketone usebenzisa iMedisence Optium X Contin, umsebenzisi uzodinga i-1.2 μl (okuphindwe kabili njengevolumu ethi "glucose"), kepha isilinganiso se-cholesterol ne-lactate usebenzisa i-Accutrend Plus senziwa “ngokulahleka kwegazi” okulinganayo noshukela .
Ngeshwa, amasampula egazi enqubo ye-glucometry akahambi kahle ngaso sonke isikhathi: kwesinye isikhathi isiguli asikwazi ukufaka masinyane ivolumu edingekayo emgqeni wokuhlolwa. Lokhu kungahle kuholele ekulahlekelweni umucu wokuvivinya. Kulokhu, amadivayisi akuvumela ukuthi "ubike" igazi kumcu wesikhathi esithile ngemuva kokuqala kwesilinganiso kungaba yinani elengezekayo kumthengi. Lawa amamitha, ikakhulukazi, afaka i-Accu-Check Go ne-Medisense Optium X Contin. Ngaphezu kwalokho, uma idivaysi yokuqala ivumela umsebenzisi ukuthi "akwenzele ukushoda" ngemizuzwana eyi-15, bese owesibili - umzuzu wonke.
Ezimweni eziningi, phakathi kwama-glucometer wesimanje akukho mehluko omkhulu kule pharamitha: iningi lawo linikeza imiphumela ngesivinini se- "sprint" ngaphakathi kwemizuzwana eyi-5-10. Ukusuka kuleli phuzu, amadivayisi we-Ascensia Entrast ne-Elta Satellite, "anikeza isinqumo" semizuzwana engu-30 nengama-45, ngokulandelana, aphuma kulayini ojwayelekile. Qaphela ukuthi enguqulweni ethuthukisiwe ye- "Satellite" - "I-Satellite Plus", "isikhathi sokubonisa" sedivayisi sincitshiswa imizuzwana engama-20.
Ngokuqondene nesikhathi sokulinganisa ezinye izimpawu zaselebhu, isikhathi eside kunazo zonke inqubo yokulinganisa i-cholesterol - imizuzwana engu-180. Ukubona izinga le-lactate kuzothatha umzuzu. Kepha ukubeka izinga lemizimba ye-ketone usebenzisa iMedisense Optium X Contin inqubo eshesha kakhulu: kuthatha imizuzwana eyi-10 kuphela.
Ngokuvamile, esigulini esinesifo sikashukela nakudokotela aso kuye, asizona izinkomba ezihlukile, "eziqinile" zokulinganisa ushukela okubalulekile, kepha uchungechunge lwemiphumela, oluhlanganisa izinkathi zesikhathi ezahlukahlukene. Kungale ndlela kuphela lapho singamahlulela khona amandla alesi sifo, uhlobo lwezinguquko zalo, ukwanela kokwelashwa kwe-hypoglycemic. Ngakho-ke, akumangazi ukuthi empeleni wonke ama-glucometer akhona afakwe umsebenzi wokukhumbula. Uhla olukhulu lwemiphumela - ukukalwa kwe-450-500 - kugcinwe kumamodeli iClever Check TD-4209, Clever Check TD-4227, Medisense Optium X Contin, Accu-Check Performa, Accu-Check Performa Nano, One Touch Ultra Easy. "Izimpendulo" ezincane kunazo zonke ze-Ascensia Entrast ne-Bionime Rightest GM500 glucometer - imiphumela eyi-10 yakamuva nje.
Inketho yezibalo ilandelayo evela kwimemori yokusebenza - amandla okubala amanani ashukela eglue ngaphezulu kwenani elithile lezinsuku. Imiphumela enjalo emise okwesikhashana ihlinzeka udokotela uhlobo lokudla oluningi lokuhlola amandla okuthuthuka kwalesi sifo. Ukumboza okukhulu kwama-“serifs” ahlukahlukene wesikhashana kulokhu maqondana neClever Check TD-4209 neClever Check TD-4227 glucometer, abale amanani aphakeme eglucose ezinsukwini ezingama-7.14, 21, 28, 60 no-90 ezedlule. Qaphela ukuthi i-Accu-Check, i-One Touch (ngaphandle kwe-Ultra Easy), amadivayisi we-Medisence nawo anokufundisa okuningi: anikeza izibalo ku- "ama-milestones" aphakathi nendawo Akukho sihloko sezibalo se-Accutrend Plus, Ascensia Entrast, One Touch Ultra Easy, Satellite, kanye namadivayisi weSatellite Plus.
Inani le-glucometer "izibalo" eziningi lingahle liboniswe ngokuhlukile ukubonisa imiphumela yokulinganisa ushukela ngaphambi nangemva kokudla. Ngokuvumelana nalokhu, imininingwane evunyelwe yenombolo ethile yezinsuku izokwehlukaniswa ngamakholomu amabili ahambisanayo. Le nketho, efakwe kwimithombo yesoftware ye-Accu-Check Active, Accu-Check Performa Nano, Amadivayisi we-One Touch Select, ibalulekile ngesizathu sokuthi ivumela udokotela nesiguli ukuthi bahlole izinga likashukela we-postprandial (1 ihora ngemuva kokudla) - inkomba efundisa kakhulu Ukuhlaziya ukusebenza kwe-ekhemisi ekhethiwe.
Sifaka futhi ukuthi abasebenzisi abasebenzisa ngokucophelela abanaka kakhulu i-"glucose schedule" futhi bagcine idayari yeziguli bangaba nentshisekelo kumadivayisi anekhono lokuxhuma kwikhompyutha bese edlulisela idatha yokulinganisa kuyo. I-Accu-Check Performa, i-Accu-Check Performa Nano, iMedisense Optium X Contin, i-Contour TS glucometer inikezwe lomsebenzi.
I-Test Strip Manipulation
Ukulula kokusetshenziswa kwamadivaysi kwansuku zonke kubuye kuncike ezimweni ezimbalwa zemivimbo yokuhlola (i-TP) - i-satellite esemqoka yanoma imiphi imitha. Ngokuklama, i-TP ye-Bionime Rightest GM 300 ingahlukaniswa (isetshenziswa zombili zisetshenziselwa igama elifanayo nangemodeli yamuva yomkhiqizo i-GM 500). Ngenxa yomklamo okhethekile, afakwa kumitha ayihambelani, kodwa ngaphesheya, okuqinisekisa ukuthi ibanga elingaphansi ukusuka endaweni yokubonisana ngegazi kuya endaweni yokusabela kungu-2 mm kuphela (ngokunyakaza okukude, igazi lihamba ngendlela efinyelela ku-6 mm ubude). Lokhu kunciphisa ukuthintana komucu wokuhlola nemvelo yangaphandle futhi kunciphisa izinga lokuhlanekezela kwemiphumela. Ngaphezu kwalokho, isampula ye-sampling yegazi nendawo yokuphendula zitholakala emaphethelweni womucu, ngakho-ke isiguli singayithola futhi siyibambe ngomphetho wamahhala ngaphandle kokuthinta "iziza ezisebenzayo". Ekugcineni, umucu wokuhlola wenziwe ngeplastikhi ekhethekile enzima futhi ayibimbi uma isetshenziswa. Lokhu kusiza ukulinganisa kokulinganisa kweziguli esezikhulile, iziguli ezisebenzisana kabi nokunyakaza.
Phakathi kwamanye ama-TPs “akhethekile”, imikhiqizo yohlobo lwe-Ascensia Entrust ingahlukaniswa, enobukhulu obukhuphukile, ngenxa yokuthi ukuthathwa kwawo ngeminwe nokuhlanganiswa kutho kusisetshenziswa.
Ubukhulu, controllability, design
Ngokuphathelene nezinto ezinjalo zokusebenziseka kalula kwama-glucometer ngosayizi wawo, controllability, usayizi wefonti kusibonisi, singasho ukuthi iningi lesibuko lesimanje alinawo umehluko wekhadinali kulezi zinhlaka. Cishe zonke ziyi-compact, lightweight, zinokucacisa okusobala kweziguli ezinanoma yiliphi izinga lobuchwepheshe bobuchwepheshe (le ndlela yokuhambisa yenziwa kusetshenziswa izinkinobho ezi-1-3), inikeze imiphumela yokulinganisa ngamanani amakhulu. Okuthile okhethekile maqondana nokuletha imiphumela yokulinganisa kumsebenzisi kungama-Clever Check TD-4227A kanye ne-SensoCard Plus kuphela, anikezwe amandla okuzwakalisa imiphumela, angahle abe afanele iziguli ezinombono ophansi. Amadivaysi ambalwa afakwe umsebenzi we-backlight (Medisense Optium X Contin, Accu-Check Performa Nano). Ezigulini ezikhohliwe (ikakhulukazi asebekhulile), amamodeli afakelwe iwashi lokukhumbuza ngesidingo sokulinganisa ushukela kaningana ngosuku (i-Accu-Check Go, i-Accu-Check Performa, i-Accu-Check Performa Nano, i-FreeStyle Papillon Mini).
Ngokuvamile, ukuze iklayenti likhethe umshini ofanelekayo kuye ngosayizi, isisindo, ukusebenza kalula, kungakuhle ukuthi umkhombise ama-glucometer avezwe ekhemisi, ayivule, "chofoza", ayibambe, njll. Okufanayo kusebenza kwizici ezifana namadivayisi njengokwakhiwa, ukucushwa, umbala. Futhi konke kuncike ekuthandweni okulandelayo komthengi.
Njengoba ukulinganiswa kwe-glucose yiziguli ezinesifo sikashukela kuyinqubo engapheli, lapho ukhetha i-glucometer cishe akunakwenzeka ukungazinaki isici sentengo.
Uma sikhuluma ngezindleko zamadivayisi ngokwawo, khona-ke iningi lawo lisebangeni ukusuka kuma-ruble ayi-1000 kuya kwangama-2500. Ukusebenza kuphela kwensimbi esebenza nge-Accutrend Plus, ene-oda ehlukile yezindleko (kusuka kuma-ruble ayi-7 500 nangaphezulu), okudlula kakhulu intengo yamanye ama-glucometer.
Ngokucabanga ukuthi abantu abaningi bathenga le divayisi “ngokungathi sína futhi isikhathi eside”, isikhathi sesiqinisekiso singaba yisiqalo esengeziwe sokukhetha. Kulokhu, siphawula ukuthi abakhiqizi bamamodeli amaningi namuhla bahlinzeka abathengi isiqinisekiso esinganqunyelwe: bonke abamele abakwa-Accu-Check, amabanga we-One Touch ne-Sattoit, kanye nemitha ye-Medisence Optium X Contin iphakathi kwemodeli enjalo.
Noma kunjalo, ukuthengwa kwegluecometer ezimeni eziningi kumane kungukudoti “okunamaqhinga”. Izindleko zokusebenza "zesikhathi eside" zedivayisi ngokuyinhloko zakhiwa ngokudliwayo - imichilo yokuhlola, kanye nama-lancets futhi, ngezinga elincane, ama-puncture (bona, nokho, nawo kufanele aguqulwe ngezikhathi ezithile ngemuva kosuku lokuphela). Ngakho-ke, lapho unikeza umthengi le noma leyo divayisi, kuyadingeka ukumjwayela ngokumiswa kokuqala kwemitha (ukuba khona kanye nenani lemichilo yokuhlola, amalambu, njll. Kulo) futhi, futhi, izindleko zemichilo yokuhlola nezinye izesekeli. Lokhu kuzokuvumela ukuthi ubale izindleko ezingaba khona zokusebenzisa ucingo isikhathi esithile. Ngemuva kokwenza lokhu “ukulinganisa”, kuzohlala kulungiswa inani elitholwe ngezimpawu zobuchwepheshe ezichazwe ngenhla namandla we mitha futhi, ngokwesisekelo salokhu, yenza ukukhetha okwanele esikalini “sekhwalithi yenani”.
Izinhlobo zama-gluueter e-Accu-Chek, umehluko wazo
Ama-glucomet we-Accu-Chek akhiqizwa yinkampani yaseSwitzerland iRoche, eyasungulwa emuva ngo-1896, okhethe ngokushesha ukugxila okuyinhloko kwemisebenzi yayo kwimikhiqizo yokuxilonga nemithi yezinkomba ezahlukahlukene. Namuhla, iRoche iyiqembu lonke lezinkampani ezitholakala emhlabeni wonke, isabelomali salo kanye nevolumu lokukhiqiza lizenza abaholi bezimboni. Eminye yemisebenzi ethintekayo yiloluhlu olubanzi kakhulu lwamathuluzi wokuzihlola wabantu abanesifo sikashukela, okubandakanya imikhiqizo elandelayo:
amadivayisi okubhoboza isikhumba,
amaphampu we-insulin namasethi wokungenisa.
Njengomkhiqizo lapho uRoche ephakamisa khona ama-glucometer akhe, kukhethwe igama elithi Accu-Chek, eliye lahlonishwa umhlaba wonke futhi liyahlonishwa phakathi kodokotela neziguli. Namuhla, umkhiqizo unikeza amakhasimende amamodeli amane aphambili amadivayisi wawo:
Ngaphandle kokwehluka kuklamo, ukusebenza nezindleko, wonke lamamitha ahlukaniswa ngokunemba okuphezulu, ukusebenza okuthembekile kanye nesibonisi esibonakalayo ngisho neziguli esezikhulile.
Isibonelo, i-gluceter ye-Accu-Chek Aktiv iye yakhiqizwa iminyaka engaba ngu-20, yenziwa ngcono kancane ngezikhathi ezithile, okwenza kube yisixhobo esithandwa kakhulu emhlabeni (ngaphezu kwezigidi ezingama-20 ezithengiswa ngama-glucometer emazweni angaphezu kwekhulu emhlabeni).I-Accu-Chek Performa Nano glucometer, nayo inosayizi omncane futhi idizayini ekhangayo yesimanje, yingakho ikhethwa yiziguli ezincane ezivame ukuba ngaphandle kwekhaya. Ubukhulu obuncane bukuvumela ukuthi uphathe imitha esikhwameni sakho noma esikhwameni.
I-Accu-Chek Mobile glucometer iyiphayona elifanele emakethe yedivayisi ngaphandle kokusebenzisa imichilo yokuhlola. Njengoba wazi, la mabala ahlanganisa izilinganiso zansuku zonke zamazinga kashukela wegazi, ngoba udinga ukwazi ukuwaphatha kahle, uwagcina ngasikhathi sinye ngokuya ngemithetho eqinile. I-Roche glucometer ehlongozwe yinkampani ayinawo la maphutha, ngoba vele iqukethe ikhasethi yokuhlola eyenzelwe izilinganiso ezingama-50. Kulula ukushintsha ngemuva kokukhathala komthombo. Le ndlela ilungele iziguli okuthi, ngenxa yezimpawu zazo, kunzima ukuphatha ngemicu evamile yokuhlola.
I-Accu-Chek Gow glucometer isebenza njengemodeli yesabelomali xaxa: inokwenza okulula futhi ubuncane bemisebenzi edingekayo, okwenza izindleko zayo zingabizi cishe kuwo wonke umuntu onesifo sikashukela.
Ngaphansi komkhiqizo we-Accu-Chek, akhiqizwa kuphela ama-glucometer, kepha nemikhiqizo ehlobene njengama-lancets - amadivaysi okubhoboza isikhumba ukuze umuntu akwazi ukungena egazini. Kwamanye amamodeli, le nketho isivele ifakiwe kumitha, noma kunjalo, ama-lancets athengiswayo ngokwehlukana anezinzuzo zawo: ukuhlukaniswa kokusebenza kuqinisekisa ukuthembeka okuphezulu komkhiqizo ngamunye futhi kwenza lula ukukhohlisa okuhambisanayo. Isibonelo esijabulisayo i-Accu-Chek Multiklix lancet, isici sayo iyikhasethi elihlanganisiwe nohlelo lokuphaka isigubhu. Ithiphu ngalinye (futhi kunengqikithi yesithupha kwikhasethi) livikelwa yikhompiyutha yalo eyinyumba, ekhishwa ngokuzenzakalelayo lapho isetshenziswa. I-punning enedivayisi enjalo ingashintshwa ezikhundleni ezijulile eziyi-11, futhi ayithathi ngaphezu kwama-millisecond amathathu ngemuva kokucindezela.
Izici zobuchwepheshe kanye nencazelo yama-glucometer
Umkhiqizo ngamunye we-Accu-Chek unokubukeza nemiyalo engatholakala kalula kuwebhusayithi yomenzi, kepha ezimweni eziningi, amaqhinga anjalo awanambitheki: noma imitha yalolu hlobo ilula kangakanani futhi kulula ukuyisebenzisa, ingafundeka uma kudingidwa imizuzu. Okuthakazelisa kakhulu kulokhu mahluko ngokobuchwepheshe obuphakathi kwamamodeli ahlukene, kuhlolwa ukuthi ngubani onesifo sikashukela ongakwazi ukwenza ukukhetha okuhle. Isibonelo, i-Accu-Chek Performa Nano glucometer yenza inqubo yokulinganisa ushukela egazini ikhululeke futhi i-organic, eyenziwe ngesisindo esiphansi nosayizi: 40 gr. isisindo, amasentimitha ayisikhombisa ubude namasentimitha amane nje ububanzi. Lokho, ngokweqiniso, igajethi izolingana ngisho nasephaketheni lezingubo. Umehluko obalulekile phakathi kwale modeli ne-analogues elula yindlela ye-electrochemical hhayi indlela yefomu yokubala ushukela wegazi (le ndlela inembile kakhulu futhi ivikelekile ngenhlanzeko). Ezinye izici zeNano Performance nazo ziyathakazelisa:
umthamo wememori yezilinganiso ezingama-500 kashukela okubonisa isikhathi nosuku lokuhlolwa,
Ibhethri elingamamitha ayi-1000
alamu wesikhundla amane
izimo ezahlukahlukene zokusebenzisa: kusuka ku-−25 kuya ku- +70 degrees Celsius, kanye nomswakama ukufika kuma-90%
Futhi, imodeli entsha ye-Accu-Chek Mobile, engasebenzisi imichilo yokuhlola evulekile, ifuneka kakhulu. Ukulahlwa kwendlela ejwayelekile yokwenza ukuthi kube nokwenzeka ukuxazulula izinkinga eziningana ngasikhathi sinye: iziguli ezinamakhono angahambi kahle wemoto kanye nombono akudingeki zikhathazeke ngokulungiselela ukuhlaziya umdweshu ohlukile, ukusetshenziswa kwethonsi legazi kumhloli kuyahanjiswa, futhi nengozi yokungcoliswa komoya ngokunganaki komugqa womugqa ngesikhathi sokusetshenziswa kuqedwe. Esikhundleni salokho, imitha ifakwe i-cartridge yezivivinyo ezingama-50 kanye ne-lancet eyakhelwe ngaphakathi, ekhuphuke kancane ngosayizi wayo (amasentimitha ayi-12 ubude futhi ingaphezulu kwesithupha ngobubanzi inesisindo sama-gramu ayi-130).
Ngokungafani nesabelometer sesabelomali, iSelula ifakwe izici eziningi ezingeziwe ezenza ukuthi kulwe nsuku zonke nesifo sikashukela: ngokwesibonelo, sinombukiso obukeka kahle we-OLED nemenyu yeRussia, kanye nenkumbulo yokulinganisa kwezilinganiso ezingama-2000. Uhlu lwezinye izinketho zemitha luyamangaza:
amandla okulandela amanani ashukela eglue ngosuku nangesonto,
setha izikhumbuzi zokuhlola,
ukusetha ibanga lokulinganisa ngakunye,
imibiko eyenziwe ngomumo mayelana nezinguquko zezinguquko zokukopisha kwikhompyutha,
amabhethri angena esikhundleni sokuhlolwa okungu-500,
isilinganiso soshukela wegazi ngemizuzwana emihlanu.
Ngokuqondene nama-Roche lancets anikezwa yinkampani, ama-Accu-Chek Multikliks okuxoxwe ngawo ngenhla anikela ngokuqina okuphezulu kokunyakaza kwenalithi ngayinye ngaphakathi kwesigubhu esinezihloko eziyisithupha. Ngasikhathi sinye, idivaysi yakhelwe ngendlela yokuthi ivikela ekungqubuzelweni ngephutha kwekhabethe kwelinye icala nokusetshenziswa futhi kwethala elilahlayo. Uhlelo ngokwalo lwenza kube lula ukuguqula wonke isigubhu ngokushesha, kusindisa abanesifo sikashukela esidingweni sokuhlupheka ngokufakwa esikhundleni kwendawo ngayinye. Kusele ukwengeza ukuthi izinaliti ezikuMultiklix zincane kakhulu: ubukhulu ngu-0,3 mm kuphela, okuthi uma kuhlanganiswa nesilinganiso esikhulu kakhulu sokukhishwa, kungenze inqubo yonke ingenabuhlungu - lokhu kungukuphikisana okubalulekile lapho usebenzisa i-lancet ezinganeni noma ezigulini ezizwelayo.
Ungayisebenzisa kanjani imitha ye-Accu-Chek?
Ngokuvamile, izincomo zokusetshenziswa okuzimele nsuku zonke kwama-gluu we-Accu-Chek zisezingeni kuwo wonke amamodeli, kepha kukhona ezinye izingqinamba ezixhomeke ekubunjweni kwensiza. Isibonelo, amanye amasampula asetshenziswa ngendlela esetshenziswayo: ukukala ushukela usebenzisa i-Accu-Chek Mobile, udinga ukuhambisa isivalo esivikelayo ekugcineni kocingo, bese ubhoboza isikhumba nge-lancet ehlanganisiwe, bese ufaka iconsi legazi endaweni yokuhlola bese uvala i-cap - izinyathelo ezine nje. Kulokhu, ngisho ingane izokwazi ukuqonda indlela yokusebenzisa imitha ye-Accu-Chek kahle.
I-Accu-Chek Performa Nano glucometer idinga umzamo omncane kakhulu ovela esigulini ukukala ukugxila kwe-glucose. Lokhu kungenxa yesidingo sokufanisa okufakiwe okushunyekwe ocingweni namakhodi afakiwe amakwe kumugqa wokuhlola. Isinyathelo sokuqala ukufaka umucu kumamitha, emva kwalokho kuzovula ngokuzenzakalelayo futhi uhlole ukuhambisana kwawo. Isiginali sokuqala ukusetshenziswa uphawu lokuphonsa kwegazi eshaywa esikrinini. Ngemuva kwalokho, udinga ukuthola iconsi legazi ngeSoftClix lancet bese unamathisela ithiphu eliphuzi lomucu wokuhlola kuyo. Kuzovela uphawu lwe-hourglass esibukweni, kukhombisa ukulinda ukukalwa, futhi ngemuva kwemizuzwana emihlanu kuphela, inkomba yezinga le-glucose nayo izokhonjiswa lapho. Umphumela uzogcinwa ngokuzenzakalelayo kwimemori yemitha, ngenkathi isicelo sesiguli, singaphawulwa ngokuthi “ngaphambi kokudla” noma “ngemuva kokudla”.
Ngokuqondene ne-Accu-Chek Multiklix, kulula kakhulu ukuyiphatha:
okokuqala, ukuba khona kwe-lancet engasetshenziswanga sigubhu kuyahlolwa, futhi uma kungekho khona kwayo isigubhu siyashintsha sibe esisha,
ukujula kokujovwa kusethiwe (uma ukusetshenziswa kokuqala kungcono ukhethe inani elincane),
ekugcineni kwelensi, inkinobho "yokuxhuma" yedivayisi icindezelwe yonke indlela,
uma iso eliphuzi libonakala ewindini elibonakalayo ngasohlangothini lwe-Accu-Chek, khona-ke lelo divayisi lilungele ukubhoboza,
kufakwa i-lancet esihlakaleni somunwe ogeziwe nowomile owenziwe umgodi wokuphela, bese kuthi isicindezelwe sicindezelwe, bese kuba khona ukubhoboza,
uma ukulahla kwegazi okutholakele kunganele, ngokuzayo lapho udinga ukusetha ukujula okukhulu kokubhoboza, okuphambene nalokho,
ukulungiselela inaliti elandelayo, isigubhu kumele siguqukele kumaki olandelayo.
Ungabheka kanjani ukunemba kwemitha?
Ama-glucmeter njalo awabonisi amanani enhloso, angahle abangelwe ukungalingani okungafanele, ukuphathwa kwesiguli noma, ezimweni ezingavamile, izinguquko ze-biochemical ekwakhiweni kwegazi okungenziwa ukuthi i-glucometer yasekhaya icatshangelwe.
Ukuze uvikeleke engcupheni yokulandela izibalo ezingalungile ngesikhathi sokwelashwa, udinga ukubheka njalo idivaysi ukuthi inembile. Ochwepheshe bancomela ukwenza lokhu okungenani kanye njalo nohhafu kuya kumaviki amabili, futhi ikakhulukazi kaningi.
Indlela elula yokuhlola ingenziwa ngokuzimela: udinga ukwenza izilinganiso ezintathu zikashukela wegazi nesikhathi esifushane phakathi kokuhlaziya (kungadluli imizuzu embalwa). Uma izinombolo ezikusikrini zihluka kakhulu phakathi kwazo, kufanele unake ukubheka ifoni esikhungweni sokuxilonga, ngoba amazinga eglucose awakwazi ukuguquka ngokushesha okukhulu.
Enye indlela ukuqhathanisa ukufundwa kwemitha yeglucose yasekhaya nemiphumela etholakala elabhoratri yezokwelapha isebenzisa imishini enamandla neqondile. Umgomo wokusebenza uyefana: emtholampilo, isilinganiso sokuqala senziwa kusetshenziswa i-glucometer yakho, emva kwalokho kwenziwa ukuhlaziya kwezokwelapha ngokushesha, futhi izinkomba ziqhathaniswa phakathi kwabo. Ukuba khona kwephutha elincane kuvunyelwe, ngoba amamitha eglucose egazi awakhelwanga ukuhlolwa okunembile kunakho konke. Inhloso yabo ukuqapha okuzimele okujwayelekile kwesimo somuntu onesifo sikashukela.
Ama-gluueter we-Accu-Chek: izinhlobo nezimpawu zawo zokuqhathanisa
Lo mkhiqizi uthole ukuthandwa okukhethekile hhayi eJalimane kuphela kepha nakwamanye amazwe omhlaba ngenxa yokukhiqizwa kwezinhlelo ezisezingeni eliphezulu zokuxilonga. Izitshalo zokukhiqiza iGlucometer zitholakala e-UK nase-Ireland, kepha ukulawulwa kwekhwalithi lokugcina kwenziwa izwe okuvela kulo ngosizo lobuchwepheshe besimanje nethimba lochwepheshe abaqeqeshiwe. Imichilo yokuhlola i-Accu-Chek ikhiqizwa efektri yaseJalimane, lapho imishini yokuxilonga ihlanganiswe futhi ithunyelwa kwamanye amazwe.
I-glucometer yithuluzi le-elekhtronikhi elisetshenziselwa ukushintsha inani le-glucose egazini. Amadivaysi anjalo ayinto ebaluleke kakhulu ezigulini ezinesifo sikashukela, ngoba zibavumela ukuba benze ukuzihlola kwamazinga kashukela nsuku zonke ekhaya.
Inkampani iRoche Diagnostic inikeza amakhasimende amamodeli ama-6 we-glucometer:
I-Accu-Chek Performa Nano,
Izici Key and Ukuqhathanisa Model
Ama-gluueter we-Accu-Chek ayatholakala kuhla, oluvumela abathengi ukuthi bakhethe imodeli elula kakhulu efakwe imisebenzi efanele. Namuhla, okuthandwa kakhulu yi-Accu-Chek Performa Nano ne-Active, ngenxa yobukhulu bawo obuncane kanye nokuba khona kwenkumbulo eyanele yokukhumbula imiphumela yezilinganiso zakamuva.
Zonke izinhlobo zamathuluzi okuxilonga zenziwe ngezinto ezisezingeni.
Icala lixubekile, lixhaswe ibhethri, okulula ukulishintsha uma kudingekile.
Wonke amamitha afakelwe izibuko ze-LCD ezibonisa imininingwane.
Ithebula: Izici zokuqhathanisa zamamodeli we-Accu-Chek glucometer
Gelcometer Model Umehluko Izinzuzo Okubi Intengo
I-Accu-Chek Mobile Ukungabikho kwemichilo yokuhlola, ukuba khona kwama-cartridge wokulinganisa. Inketho enhle kakhulu yabathanda ukuhamba. Izindleko eziphakeme zamakhasethi wokulinganisa nezinsimbi. 3 280 k.
I-Accu-Chek Iyasebenza Isikrini esikhulu esibonisa amanani amakhulu. Ukucisha amandla kusebenze. Impilo yebhethri ende (kufika izilinganiso eziyi-1000). — 1 300 p.
I-Accu-Chek Performa Nano Umsebenzi wokuvala othomathikhi, ukuzimisela kwempilo yeshalofu yemichilo yokuhlola. Umsebenzi wokukhumbuza kanye namandla okudlulisa imininingwane kwikhompyutha. Iphutha lemiphumela yokulinganisa lingu-20%. 1,500 p.
I-Accu-Chek Performa Isikrini sokuqhathanisa se-LCD sosizi, izinombolo ezinkulu. Kudluliswa imininingwane kwikhompyutha isebenzisa itheku elibi. Umsebenzi wokubalwa kwe-avareji yesikhathi esithile. Inani elikhulu lememori (kufika kuzilinganiso eziyi-100). Izindleko eziphakeme 1 800 p.
I-Accu-Chek Go Imisebenzi eyengeziwe: iwashi le-alamu. Ukukhishwa kolwazi ngezibonakaliso ezizwakalayo. Inani elincane lememori (kufika kuzilinganiso ezingama-300). Izindleko eziphakeme. 1,500 p.
I-Accu-Chek Avva Isibambo sokuphenya ngokujula okuguqukayo kwesikhombo. Imemori yangaphakathi enwetshiwe: kufika ku-500 wokulinganisa. Isiqeshana selancet esingena kalula. Impilo yenkonzo ephansi. Kusuka ku-780 kuye ku-1000 p.
Iziphakamiso zokukhetha i-glucometer
Kubantu abahlushwa isifo sikashukela sohlobo 2, kubalulekile ukukhetha i-glucometer, enamandla okulinganisa hhayi kuphela i-glucose yegazi, kodwa nezinkomba ezifana ne-cholesterol ne-triglycerides. Lokhu kusiza ukuvimbela ukuthuthukiswa kwe-atherossteosis ngokuthatha izinyathelo ezifika ngesikhathi.
Ngohlobo 1 sikashukela, kubalulekile lapho ukhetha i-glucometer ukunikela ukukhetha kumadivaysi anemichilo yokuhlola. Ngosizo lwabo, ungashesha ukukala izinga le-glucose egazini kaningi ngosuku ngangokunokwenzeka. Uma kunesidingo sokuthatha izilinganiso kaningi ngokwanele, kuyanconywa ukunika izintandokazi kulawo madivayisi lapho izindleko zemigwaqo yokuhlola ziphansi, ezizonga.
Ukufundwa kwe-Glucometer: ishadi elijwayelekile noshukela lokuguqulwa
Esikhathini sesifo sikashukela sanoma yiluphi uhlobo, umuntu kufanele aqaphe ushukela emzimbeni futhi enze njalo ukuhlolwa kwegazi. Njengoba wazi, ushukela ungena emzimbeni ngokudla.
Ngokwephulwa kwe-carbohydrate metabolism, ushukela uqongelela egazini futhi amazinga e-insulin abe ephakeme kunokujwayelekile. Uma izinyathelo ezidingekayo zingathathwanga, isimo esinjalo singadala izinkinga ezinkulu, kufaka phakathi i-hypoglycemic coma.
Ekuhlolweni kwegazi njalo koshukela, kusetshenziswa amadivayisi akhethekile - ama-glucometer. Idivaysi enjalo ikuvumela ukuthi ufunde ngesimo somzimba hhayi kuma-diabetes kuphela, kodwa nakubantu abaphilile. Ngenxa yalokhu, kungenzeka ukuthola ngesikhathi ukukhula kwesigaba sokuqala salesi sifo bese uqala ukwelashwa okudingekayo.
Ukuze umuntu akwazi ukubona ukwephulwa, kunamazinga athile wamazinga kashukela egazini kubantu abaphilile. Ku-mellitus yesifo sikashukela, lezi zinkomba zingahluka kancane, okuthathwa njengento eyamukelekayo. Ngokusho kodokotela, umuntu onesifo sikashukela akadingi ukwehlisa ngokuphelele ushukela wegazi, ukuzama ukuletha imiphumela yokuhlaziywa eduze kwamazinga ajwayelekile.
Ukuze umuntu onesifo sikashukela azizwe emuhle, izinombolo zingakhushulwa zifike okungenani ku-4-8 mmol / ilitha. Lokhu kuzovumela oshukela ukuba aqede ikhanda, ukukhathala, ukudangala, ukunganaki.
Ngokwesifo sikashukela sohlobo 2, kukhona ukwanda okunamandla kwe-glucose yegazi ngenxa yokuqongelela ama-carbohydrate. Ukwanda okungazelelwe kushukela kubhebhethekisa kakhulu isimo sesiguli, ukuze isimo sibe sesijwayelekile, isiguli kufanele sifake insulin emzimbeni. Ekushoneni kwe-insulin okubabazekayo kubantu, ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela kungenzeka.
Ukuvimbela ukuvela kokuguquguquka okubukhali okunjalo, udinga ukubheka i-glucometer nsuku zonke. Ithebula elikhethekile lokuhumusha lezinkomba ze-glucometer lizokuvumela ukwazi ukuthola imiphumela yocwaningo, ukwazi ukuthi zihluka kanjani nokuthi kuliphi izinga elisongela impilo.
Ngokusho kwetafula, amanani kashukela wegazi onesifo sikashukela angaba ngale ndlela elandelayo:
Ekuseni ngesisu esingenalutho, ushukela wegazi oshukela kwabanesifo sikashukela angaba ngu-6-8.3 mmol / litre, kubantu abanempilo - 4.2-6.2 mmol / lit.
Ngemuva kwamahora amabili sidlile, izinkomba zikashukela zesifo sikashukela azikwazi ukuba ngaphezulu kwe-12 mmol / ilitha, abantu abaphilile kufanele babe nenkomba yokungabi ngaphezu kuka-6 mmol / ilitha.
Umphumela wokufunda kwe-glycated hemoglobin in diabetesics yi-8 mmol / litre, kumuntu onempilo - hhayi ophakeme kuno-6.6 mmol / litre.
Ngaphezu kwesikhathi sosuku, lezi zifundo futhi zincike eminyakeni yesiguli. Ikakhulu, ezinganeni ezisanda kuzalwa kuze kube unyaka, izinga likashukela wegazi lisuka ku-2,7 liye ku-4,4 mmol / ilitha, ezinganeni ezisuka kumunye kuya kwezinhlanu ubudala - 3.2-5.0 mmol / lit. Emdala aze afike eminyakeni eyi-14, imininingwane isukela ku-3.3 iye ku-5.6 mmol / litre.
Kubantu abadala, okujwayelekile kusuka ku-4,3 kuye ku-6.0 mmol / ilitha. Kubantu asebekhulile ngaphezulu kweminyaka engama-60, amazinga kashukela egazi angaba ngu-4.6-6.4 mmol / litre.
Leli thebula lingashintshwa, kucatshangelwa izici zomzimba ngamunye.
Ukuhlolwa kwegazi nge-glucometer
Ku-mellitus yesifo sikashukela sohlobo lokuqala noma lwesibili, isiguli ngasinye sinezinkomba ngazinye. Ukukhetha irejimeni yokwelashwa eyiyo, udinga ukwazi isimo esijwayelekile somzimba kanye nezibalo zezinguquko emazingeni kashukela egazini. Ukwenza ukuhlolwa kwegazi kwansuku zonke ekhaya, abanesifo sikashukela bathenga i-glucometer.
Umshini onjalo ukuvumela ukuthi uzenzele ngokwakho, ngaphandle kokuya emtholampilo ukuthola usizo. Ukusebenziseka kwayo kulele ekutheni idivaysi, ngenxa yobukhulu bayo obuhlanganisiwe kanye nesisindo esikhanyayo, ingathwalwa nawe esikhwameni noma ephaketheni. Ngakho-ke, umuntu onesifo sikashukela angasebenzisa i-analytez nganoma yisiphi isikhathi, noma nje eshintsha kancane isimo.
Amadivaysi okulinganisa akala ushukela wegazi ngaphandle kobuhlungu nokungajabuli. Abahlaziyi abanjalo abaphakanyisiwe hhayi kuphela kwabanesifo sikashukela, kodwa futhi nakubantu abaphilile. Namuhla, amamodeli ahlukahlukene wama-glucometer anemisebenzi ehlukene ayatholakala ngokuthengisa, ngokuya ngezidingo zesiguli.
Ungathenga futhi nedivaysi ephelele, ngaphandle kokulinganisa ushukela, ungathola i-cholesterol yegazi. Isibonelo, ungathenga amawashi ama-diabetes. Enye indlela, kunamadivayisi akala umfutho wegazi futhi asuselwa kwidatha etholakele, abale izinga le-glucose emzimbeni.
Njengoba inani ushukela liyahlukahluka usuku lonke, izinkomba ekuseni nakusihlwa zihluka kakhulu. Kubandakanya idatha, imikhiqizo ethile, isimo somzwelo somuntu, nomsebenzi womzimba kungathonya imininingwane.
Njengomthetho, udokotela uhlala ethakazela imiphumela yocwaningo ngaphambi nangemva kokudla. Imininingwane enjalo iyadingeka ukuze kutholakale ukuthi umzimba ubhekana namanani angakanani kashukela. Kufanele uqonde ukuthi ngesifo sikashukela sohlobo lokuqala nesesibili, izinkomba zizohluka. Ngokuvumelana nalokho, okujwayelekile ezigulini ezinjalo kuhlukile.
Iningi lamamodeli wesimanje lama-glucometer asebenzisa i-plasma yegazi ukuhlaziya, lokhu kukuvumela ukuthi uthole imiphumela ethe xaxa yocwaningo. Okwamanje, sekusungulwe ithebula lokuhumusha lezinkomba ze-glucometer, kuzo zonke izinkambiso ze-glucose lapho kubhalwa khona usebenzisa ithuluzi.
Ngokusho kwetafula, esiswini esingenalutho, izinkomba ze-plasma zingasukela ku-5.03 ziye ku-7.03 mmol / ilitha. Lapho uhlola igazi le-capillary, izinombolo zingasukela ku-2,5 kuye ku-4,7 mmol / ilitha.
Ngemuva kwamahora amabili kudliwe i-plasma kanye negazi le-capillary, izinga likashukela alikho ngaphezu kwe-8.3 mmol / litre.
Uma imiphumela yocwaningo idluliwe, udokotela uxilonga isifo sikashukela futhi anikeze ukwelashwa okufanele.
Ukuqhathaniswa kwezinkomba zama-glucometer
Izinhlobo eziningi zamanje ze-glucometer ziyalinganiswa nge-plasma, kepha kukhona amadivaysi ahlola igazi lonke. Lokhu kufanele kubhekwe lapho kuqhathaniswa ukusebenza kwensiza nedatha etholakala elebhu.
Ukubheka ukunemba komhlaziyi, izinkomba ezitholwe ku-glucometer yesisu ezingenalutho ziqhathaniswa nemiphumela yocwaningo elabhoratri. Kulokhu, udinga ukuqonda ukuthi i-plasma iqukethe ushukela omningi ngamaphesenti ayi-12 kunegazi le-capillary. Ngakho-ke, ukufundwa okutholakele kwe-glucometer ocwaningweni lwegazi le-capillary kufanele kuhlukaniswe yisici esingu-1.12.
Ukuhumusha kahle idatha etholakele, ungasebenzisa itafula elikhethekile. Izindinganiso zokusebenza kwama-glucometer nazo ziyathuthukiswa. Ngokwezinga elijwayelekile elamukelwa, ukunemba kwensiza okuvumelekile kungaba ngale ndlela elandelayo:
Ushukela wegazi ongaphansi kuka-4.2 mmol / ilitha, imininingwane etholakele ingahluka ngo-0.82 mmol / litre.
Uma imiphumela yocwaningo ingu-4,2 mmol / ilitha nangaphezulu, umehluko phakathi kwezilinganiso awunakuba ngaphezulu kwamaphesenti angama-20.
Khumbula ukuthi izici zokunemba zingathonywa yizici ezahlukahlukene. Ikakhulu, imiphumela yokuhlola ingahle ihlanekezelwe lapho:
Izidingo ezinkulu zika-fluid,
Ukulimazeka kokubonakalayo kushukela,
Ukwehla kwesisindo okumangalisayo,
Ukuba khona kwezifo ezahlukahlukene,
Ukuvalwa kwegazi okumpofu,
Ukuphefumula okusheshayo nama-arrhythmias,
Isizinda esingokomzwelo esingazethembeki,
Ukuba khona kwe-acetone emzimbeni.
Uma ezinye izinkomba ezingenhla zikhonjwa, kufanele uthintane nodokotela wakho ukuze ukhethe uhlobo lwangempela lokwelashwa.
Udinga futhi ukulandela imithetho ethile lapho ulinganisa ushukela wegazi nge-glucometer.
Ngaphambi kwenqubo, isiguli kufanele sigeze kahle ngensipho futhi sisule izandla ngethawula.
Kuyadingeka ukufudumeza izandla zakho ukwenza ngcono ukuhamba kwegazi. Ukuze wenze lokhu, amabhulashi ancishiselwa phansi futhi akhanyiswe kalula ekuhambeni kusuka ezintendeni zezandla kuya kwiminwe. Ungafaka futhi izandla zakho emanzini afudumele bese uzifudumeza kancane.
Izisombululo zotshwala ziqinisa isikhumba, ngakho-ke kunconywa ukuthi zisetshenziselwe ukusula umunwe kuphela uma isifundo senziwa ngaphandle kwasekhaya. Musa ukusula izandla zakho ngokusula okumanzi, ngoba izinto ezivela ezintweni zokuhlanzeka zingahlanekezela imiphumela yokuhlaziywa.
Ngemuva kokuba umunwe ugwetshwe, amaconsi okuqala ahlala esulwa, ngoba aqukethe isilinganiso esengeziwe soketshezi olungejwayelekile. Ukuhlaziywa, kuthathwa iconsi lesibili, okufanele lisetshenziswe ngokucophelela emugqeni wokuhlola. Ukufaka igazi emgqeni akuvunyelwe.
Ukuze igazi liphume ngokushesha futhi ngaphandle kwezinkinga, ukubhoboza amandla kumele kwenziwe ngamandla athile. Kulokhu, awukwazi ukucindezela umunwe, ngoba lokhu kuzonciphisa uketshezi olungena ngaphakathi. Ngenxa yalokhu, isiguli sizothola izinkomba ezingalungile. U-Elena Malysheva kuvidiyo ekulesi sihloko uzokutshela okufanele ubheke lapho ufunda i-glucometer.
Ungabheka kanjani ukunemba kwemitha? Amatafula Nezinkambiso
Amazinga kashukela wegazi asungulwa maphakathi nekhulu lamashumi amabili sibonga ngokuqhathanisa ukuhlolwa kwegazi kubantu abaphilile nabagulayo.
Ezokwelapha zesimanje, ukuphathwa kwe-glucose egazini lalabo abanesifo sikashukela akunikezwa ukunakwa okwanele.
Iglucose egazini sikashukela iyohlala iphakeme kunabantu abaphilile. Kepha uma ukhetha ukudla okulinganiselayo, ungasinciphisa kakhulu lesi sikhombisi, usisondeze kokujwayelekile.
Ngaphambi kokudla ekuseni (mmol / L): 3.9-5.0 kwezempilo ne-5.0-7.2 kwabanesifo sikashukela.
Amahora angama-1-2 ngemuva kokudla: afinyelela ku-5.5 ngokudla okunempilo kuze kufike ku-10,0 kwabanesifo sikashukela.
I-Glycated hemoglobin,%: 4,6-5.4 enempilo futhi efinyelela ku-6.5-7 yabanesifo sikashukela.
Uma kungekho zinkinga zezempilo, ushukela wegazi usezingeni le-3.9-5.3 mmol / L. Esiswini esingenalutho futhi ngokushesha ngemuva kokudla, lokhu okujwayelekile ngu-4.2-4.6 mmol / L.
Ngokusetshenziswa ngokweqile kokudla okugcwele ama-carbohydrate asheshayo, ushukela kumuntu ophile kahle ungakhuphuka ufike ku-6.7-6.9 mmol / l. Ikhuphuka ngaphezulu ezimweni ezingavamile.
Ukuze ufunde kabanzi ngamazinga ajwayelekile we-glucose wegazi ezinganeni nakubantu abadala, chofoza lapha.
Yini okufanele ilingane noshukela wegazi ngemuva kokudla, kuchazwe kulesi sihloko.
Izinkomba ze-Glucometer zesifo sikashukela
Ama-glucometer anamuhla ahlukile kokhokho bawo ikakhulukazi ngoba abalwa hhayi ngegazi eliphelele, kodwa ngeplasma yalo. Lokhu kuthinta kakhulu ukufundwa kwedivayisi futhi kwezinye izimo kuholela ekuhlolweni okunganele kwamanani atholakele.
Ukulinganiswa Ngegazi Okuphelele
Ukunemba kuqhathaniswa nezindlela zaselebhu eduze komphumela otholwe ngocwaningo lwelebhu kunembile
Amanani ashukela ajwayelekile (mmol / L): ukuzila ukudla ngemuva kokudla isuka ku-5.6 iye ku-7.2 ingadluli ku-8.96 kusuka ku-5 kuye ku-6.5 akusekho ngaphezu kwe-7.8
Ukuhambisana kokufundwayo (mmol / l) 1 0,89
Uma i-glucometer ikalwa nge-plasma, khona-ke ukusebenza kwayo kuzoba ngu-10-12% ukuphakama kunamadivayisi alinganiswe negazi eliphelele. Ngakho-ke, ukufundwa okuphezulu kuleli cala kuzobhekwa njengokujwayelekile.
Ukulinganiswa kokulinganisa kwemitha kungahluka kunoma yikuphi - kuya ngedivayisi.
Ungafinyelela iphutha elincane lokufundwa kwensimbi ngokubuka imithetho elula:
Noma iyiphi i-glucometer idinga isheke lokunemba ngezikhathi ezithile elabhoratri ekhethekile (eMoscow itholakala 1 Moskvorechye St.).
Ngokwokwejwayelekile yamazwe, ukunemba kwemitha kuhlolwa ngezilinganiso zokulawula. Ngasikhathi sinye, ukufundwa okungu-9 kwayi-10 akufanele kuhlukane komunye nomunye kungaphezu kwama-20% (uma izinga likashukela lingu-4.2 mmol / l noma ngaphezulu) futhi kungabi ngaphezu kuka-0.82 mmol / l (uma ngabe kubhekiswa ushukela lingaphansi kuka-4.2).
Ngaphambi kokusampula kwegazi ukuze kuhlaziywe, udinga ukugeza ngokuphelele futhi usule izandla zakho, ngaphandle kokusebenzisa utshwala nokusula okumanzi - izinto zangaphandle esikhunjeni zingahlanekezela imiphumela.
Ukufudumeza iminwe yakho futhi uthuthukise ukugeleza kwegazi kubo, udinga ukwenza ukubhucungwa kwabo kokukhanya.
Ukubhoboza umlomo kufanele kwenziwe ngamandla anele ukuze igazi liphume kalula. Kulesi simo, ukulahla kokuqala akuhlaziywa: kuqukethe okuqukethwe okukhulu kwe-intercellular fluid futhi umphumela ngeke uthembeke.
Akunakwenzeka ukufafaza igazi emgqeni.
Abantu abanesifo sikashukela kudingeka bahlole njalo amazinga abo kashukela. Kufanele igcinwe kungakapheli u-5.5-6.0 mmol / L ekuseni ngesisu esingenalutho futhi ngokushesha ngemuva kokudla. Ukuze wenze lokhu, kufanele unamathele ekudleni okune-carb ephansi, okuyisisekelo okunikezwe lapha.
Izinkinga ezingalapheki ziba khona uma izinga likashukela isikhathi eside lidlula i-6.0 mmol / L. Uma iphansi, ayanda amathuba okuba umuntu onesifo sikashukela aphile impilo ephelele ngaphandle kwezinkinga.
Kusuka kuviki yama-24 kuye kwelama-28 lokukhulelwa, kunconywa ukuthatha isivivinyo sokubekezelela ushukela ukuze ususe ubungozi bokuthola isifo sikashukela sokukhulelwa.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi inqubo kashukela wegazi iyefana kubo bonke abantu, kungakhathalekile ubulili nobudala.
Ngemuva kweminyaka engama-40, kunconywa ukuthi kuhlaziywe i-glycated hemoglobin kanye njalo eminyakeni emi-3.
Khumbula, ukunamathela ekudleni okhethekile, unganciphisa ubungozi bezinkinga ohlelweni lwezinhliziyo, iso, izinso.